Blog of Nyein Chan Yar: 2006.04
ကြော်ငြာ မလို့ပါ။ အလကား ပေးမှာပါ။
Last year, I madeasearch page to use it for my own. It is quite useful for me since it works the way I wanted. Later, thinking some other people might like it, I put it on my personal website. But I think onlyafew people see it. But I didn’t care, coz I don’t think it is something awesome.
But, these days, there isasearch page with all google services. And people on digg are talking about that. There, I look at it. Oh… so… what?
So, I decided to talk about mine. :-)
What I made is that you just enter your query in single textbox and click on any icon of search engine you like. The search engines I included there are, Google, Yahoo, MSN, Wikipedia, Answers, altavista and lycos. Yes… Wikipedia and Answers are included .
Even Google search is quite handy enough on my page. Coz, video search and blog search are not on google main page.
Ok, you just try it. You will like it.
Download it if you like it. I putapacked zip file on that page. So, you don’t need to visit my page every time. Unzip it intoafolder. Bookmark it or make home page if you like.
I have to advertisealot to give something free.
Link: see it, use it and download it here.
Categories / tags: Miscellaneous
Posted by Daythanix Chann at Sunday, April 30, 20065comments:
ဒီတစ်ခါတော့ လူထုဒေါ်အမာ တော်တော် ပေါက်ကွဲနေပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တော်တော် ပေါက်ကွဲနေပါတယ်။
ဘိန်းပစ် ဖမ်းတယ် ဆိုတာကြားဖူးပါတယ်။ အခုသူတို့လုပ်တာ ဒါပါပဲ။ ဗုံးတွေ သူတို့ဟာသူတို့ ထောင်ပြီး ခွဲပြ၊ နောက် ဟိုအဖွဲ့ ဒီအဖွဲ့ လုပ်တာ ဘာညာ ဆိုပြီး စွတ်စွဲ။ ပြီး ဒီအဖွဲ့တွေ အကြမ်းဖက်သမားပါ လို့ ကြေငြာ။ ပြီး NLD က ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ဆိုပြီး မတရားသင်း ကြေငြာ နိုင်ပါတယ်ပေါ့။ တော်တော် အောက်တန်းကျတဲ့ အကြံအစည် ပါလားနော်။
ဗုံခွဲတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်လို့ MI ဟောင်းတစ်ယောက် ကိုယ်တိုင် ပြောသွားတာပါ။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
Kyaw Myint Myo says many bomb explosions in Rangoon were planted by army and intelligence groups. “It's just to scare civilians and to alert the army.” He added that when he was with the OCMI, he and his colleagues sometimes received information that army factions were behind the bombings. He said it is impossible for insurgents to enter downtown Rangoon. “We have large security networks involving police, army, intelligence groups and township-level ruling officials and informants [to secure Rangoon]. ” [source]
တစ်ကယ်တော့ သူပြောပြော မပြောပြော ပါ၊ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ပဲ ပြည်သူအတွက် လုပ်နေကြတာပါ။ စစ်အစိုးရသာ ပြည်သူ တွေကို သတ်ပြီး အာဏာ သိမ်းထားတာပါ။ စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။
Posted by Daythanix Chann at Thursday, April 27, 2006 1 comment:
AsaBlogger user, I have been desperately lookingaway to categorize my posts. The previous solutions I tried were some twists with “Blogger’s blog search” and technorati.
I know I cannot count on Blogger’s search. I don’t know why their search bot didn’t crawl my site. My blog didn’t ping them?
And later, I depended on technorati. But later I found that my tags are not perfectly hooked there.
Story went on so on and so on.
Now… I can rest in peace. :D
I’ve gotaway to categorize in Blogger.
This way uses del.icio.us.
Here is how to put it in place.
Createanew del.icio.us account for your blog and just bookmark your post giving “tags” which will stand as category.
Let’s tagroll it now.
On that page, adjust the sliders as you wish.
For title, I use “Categories / tags” so that it will look more realistic on my blog. :P
Sorting is as you like.
If you choose “list”, it is suitable to put on “side bar”. “cloud” is more suitable if you can makeanew box at the bottom or top of the page. I chose “list”, and it appears as you can see on this page.
And select “tag count” so that number of posts with that tag will be shown.
You are done with settings. Let’s copy and paste the code there into your template.
But let’s do some extra things in our post. This part is to let your audience know the category of the post they just read. And by clicking it they can browse other posts in that category. (obviously. huh?)
Let’s make it conforms the technorati tag format.
Suppose that your post category is “gadget”, html tag will looks like this:
<a href="http://del.icio.us/username/gadget" rel="tag">gadget</a>
replace username with your user name, of coz. :D
for post in “joke” category,
<a href="http://del.icio.us/username/joke" rel="tag">joke</a>
so, this is the end of story.
del.icio.us. is delicious!!! isn't it?
Categories / tags: how to,
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, April 25, 20063comments:
Posted by Daythanix Chann at Saturday, April 22, 20063comments:
I checked Wikipedia to read about Earth Day and found that the introduction paragraph has the following quotation:
--United Nations Secretary-General U Thant
March 21, 1971.
Technorati Tags: Myanmar, Wikipedia,
Posted by Daythanix Chann at Saturday, April 22, 2006 No comments:
အားလုံး အားလုံး အတွက် ပျော်စရာ ကဲစရာ သင်္ကြန်၊ ထူးဆန်းလှပတဲ့ နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ။
ငြိမ်းချမ်းရာ မှ ချစ်ခြင်း များစွာဖြင့်
Technorati Tags: mm+misc
Posted by Daythanix Chann at Thursday, April 13, 20063comments:
[The following tutorial is about creation of eot font i talked before.]
UPDATE (August 03, 2007):
ဒီ tutorial မြန်မာလို ပြန်ရေး လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် အသုံးကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ blogspot မှာတင်တဲ့ blog တွေအတွက် ဦးတည်ပြီး ရေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး zawgyi-one font ရှိပြီးသားလို့ယူဆထားလိုက်ပါမယ်။
ကဲ... ပထမဆုံး WEFT program ကို download လုပ်လိုက်ကြရအောင်။ အခမဲ့ရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ install လုပ်ထားပေါ့နော်။ ဒါပြီးရင်တော့ သူ့ကို ခဏထားထားလိုက်ပါအုံး။
အခုလောလောဆယ် html file လေးတစ်ခုလုပ်ရအောင်။ အဲဒီ file မှာ zawgyi-one နဲ့စာနဲနဲရေးလိုက်ပါ။ ရေးရင် font-family ကို ဒီလို style="font-family: Zawgyi-One;" ဆိုပြီး ကြေငြာထားတာပါရပါမယ်။ ပြီးရင် လွယ်အောင် c:\_ အောက်မှာ test.html ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ သိမ်းလိုက်ပါ။
ဟာ... html ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ မသိဘူး ဆိုရင်တော့ ဟောဒီ file ကိုပဲ c:\_ အောက်ကို download လုပ် unzipလုပ်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။
ကဲ အလုပ်စရအောင်။ WEFT program ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ စစချင်းဖွင့်တော့ font တွေကို scan လုပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးရင် နာမည်တို့ email တို့ မေးလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် STEP 1 စရအောင်
[...] button လေးကိုနှိပ်ပြီး ခုနက test.html ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် [add] ကိုနှိပ်ပါ။
"weft is now ready ဘာညာဘာညာ..." ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် » yes ကိုနှိပ်ပါ။
"no subsetting" ကိုရွေးပါ။ (ဒါအရေးကြီးပါတယ်။!!!!!!!!)
fonts may only be used from pages under these roots ဆိုတာမှာ >> editကို click ပါ။
ကိုယ့် URL ကိုဖြည့်ပါ။ ("http://" မပါပဲ။ ) ဥပမာ။ ။dathana.blogspot.com/ ဆိုတာမျိုး။
add ကို နှိပ်ပါ။
အပေါက်တွေကို ဒီပုံမှာလို ချစ်ပါ။
font creation ပြီးစီးကြောင်း နဲ့CSS ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။.
အဲဒီCSS ကို notepad ကူးပြီးသိမ်းလိုက်ပါ.
အဲဒီ dialog ကိုပိတ်ပြီး
ဟောဒီအပေါက်ကို ချစ်ပြီး next>>
font လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။. ရလာတဲ့ font ကို test.html နားမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ C:\_ အောက်မှာပေါ့။
သူတို့ကို နေရာချထားပေးရအောင်။ ZAWGYIO0.eot ကို remote loading ခွင့်ပြုတဲ့ web server တစ်ခုပေါ်ကို upload လုပ်ပါ။
ဥပမာ ripway.com တို့ pages.google တို့
ခုနကရလိုက်တဲ့ CSS မှာ အဲဒီ upload လုပ်လိုက်တဲ့ font ရဲ့ URL ကိုဖြည့် ပါ။ (အဝါရောင်စာသားနေရာ)
} ဒီ code ကိုtemplate ရဲ့ CSS ပိုင်းမှာ ကူးထည့်ပါ။
thinking this might be helpful for my myanmar blogger friends, i wrote this following tutorial. forgive me for spelling/grammar mistakes and lack of beautiful talks. I'm quite busy these days. So, I’m writing this rather hurriedly on notepad.
if u still have any question or suggestion do not hesitate to ask me. just leave comment or email me to dathana at gmail.com
in this tutorial I'm supposing that u r making this font forablog at blogspot.
download the WEFT program. (it's free of charge.)
before we start, u need to make an html file.
for simplicity, make an html file written in zawgyi font and save it in c:\_ and name it test.html.
(name, location are just arbitrary.)
Make sure ur html file contain font face declaration style="font-family: Zawgyi-One;"
Let's run WEFT program now.
when u run the program, it will scan the fonts.
after that, it will ask ur name and email.
Let's say, STEP I starts here.
click button [...]>> choose the file you saved
u will see "weft is now ready blah blah blah..."
select>> no subsetting
fonts may only be used from pages under these roots
enter ur URL (excluding http://)
check the boxes as follows:
when font creation ends dialog box containing CSS will appear.
copy CSS to notepad and save it.
close that dialog.
check the box and next>>
font creation is done. created font cand be found around ur test.html file. i.e. C:\_
Here I'm supposing that u r making this font forablog at blogspot.
upload ur ZAWGYIO0.eot to ur web server which allows remote loading.
geocities does not allow remote loading.
ripway.com allows remote loading.
in CSS, insert the location ofdfont file (yellow text shown below) u've just uploaded.
copy and paste that CSS to CSS part of ur template.
re-publish your blog.
Technorati Tags: tutorial, myanmar font,
Posted by Daythanix Chann at Monday, April 10, 2006 10 comments:
Labels: font, how-to
မနေ့က ပန်းချီ ပြပွဲတစ်ခု သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီ တွေရော installation art တွေရော ရေရေလည်လည် ကြွေ ဖို့ ကောင်ပါတယ်၊ ဓါတ်ပုံရိုက် ခဲ့ချင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ digital camera လေး ဘာလေး မပိုင်ဆိုင်လေတော့ blog အတွက် ဘာပုံမှ ယူမလာခဲ့နိုင်ဘူး။ ပြပွဲက လကုန်ထိရှိမှာမို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် ဆီက camera ငှားလို့ရရင်၊ နောက်ပြီး အချိန်ရရင်တော့ သွားရိုက်ခဲ့ပါဦးမယ်။
ဒီပြပွဲကိုကြည့်ရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်က ကျောင်း club တစ်ခုကလုပ်တဲ့ အနုပညာပြပွဲ တစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်။ ခန်းမကျယ်ကြီးထဲမှာ ပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ကဗျာ၊ installation art, performance art အစုံပါပဲ။ အားလုံး ၀ါသနာရှင် ကျောင်းသားတွေရဲ့လက်ရာ ချည်းပါ။ ဒီအထဲမှာ performance art တစ်ခု ကိုတော့ ကျွန်တော် စိတ်အ၀င်စားဆုံးပါပဲ။ ဂတ်ထူ စက္ကူ နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ငါးပေ ပတ်လည်လောက် ရှိတဲ့အခန်းလေး၊ အထဲမှာ မီးလုံးတစ်လုံးထွန်းထားပြီး လူတစ်ယောက် ထိုင်နေပါတယ်။ အခန်းမှာဖေါက်ထားတဲ့ (တစ်လက်မ ပတ်လည်လောက်) ချောင်းကြည့်ပေါက် ကလေးကနေ ကျွန်တော် တို့ကချောင်းကြည့်ရပါတယ်။
အထဲမှာ ကျောင်းသား/သူ တစ်ယောက်ယောက် အလှည့်နဲ့နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော် ကလည်း အဲ့ဒါကို စိတ်ဝင်စားတော့ ခဏခဏ သွားကြည့်ဖြစ်နေတာ ပေါ့လေ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကုလားထိုင်မှာ အတည်နဲ့ ထိုင်နေတဲ့သူတို့၊ တစ်ခါတစ်ရံ စာအုပ်ဖတ်နေသူတို့၊ ကြမ်းပြင်မှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်ရင်း နံရံမှာ ကဗျာတွေ စာတွေ ရေးနေတဲ့ သူတို့ အစုံပါပဲ၊ နှစ်ရက်လောက်နေတော့ နံရံမှာ စာတွေ ပြည့်သွားပါတယ်။
တစ်ခေါက်ကျတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြည့်တာ နဲနဲကြာသွားတယ်၊ (နံရံက စာတွေ လိုက်ဖတ်ကြည့် နေလို့ပါ။) အဲ့တော့ ထိုင်နေတဲ့လူက ရုပ်တရက် စာရွက် အပိုင်းလေးမှာ စာမြန်မြန် ရေးပြီး စာရွက်ခေါက်လေးကို အပေါက် ထဲကနေ ကျွန်တော့်ဆီ ပစ်ချပေးပါတယ်။
“နေရာချင်း လဲမလား” တဲ့။
Technorati Tags: art, mm+misc
Posted by Daythanix Chann at Saturday, April 08, 20065comments:
slashdot is pink
google is learning to kiss
mayvelous is thinking to strip
here are more hits
here are all hits
Posted by Daythanix Chann at Saturday, April 01, 20066comments: